PewDiePie - Wikipedia
Felix Arvid Ulf Kjellberg (dhashay 24 Oktoobar 1989), oo loo yaqaan internetka PewDiePie, waa Iswidishka YouTuber ee Iswidishka, majaajiliistaha, gamer, iyo samafalaha, oo caan ku ah ugu horrayn fiidiyowyadiisa aynu ku ciyaarno iyo riwaayado isku duuban oo majaajillo ah.
Ka dib markii uu diiwaangeliyey kanaalkiisa caanka ah ee 'YouTube channel' ee 2010, Kjellberg wuxuu ugu horreyn soo dhejiyay Aynu ku ciyaarno fiidiyowyada naxdinta leh iyo ciyaaraha fiidiyowga ficilka ah. Kanaalkiisu wuxuu la kulmay koritaan la taaban karo oo caan ah labada sano ee soo socota wuxuuna gaadhay 1 milyan oo macaamiil bishii Luulyo 2012. Waqti ka dib, qaabkiisa nuxurkiisu wuxuu u kala duwanaa oo ay ku jiraan vlogs, gaagaaban majaajillo, bandhigyo qaabeysan, iyo fiidiyowyo muusig ah.
Kjellberg wuxuu noqday kan ugu badan ee la qoray "YouTuber" taariikhdu markay ahayd 15 Ogosto 2013, ka dib markii uu si kooban uga gudbay dabayaaqadii 2013 YouTube Spotlight, wuxuu si adag u hayey cinwaanka illaa horraantii 2019, markii uu si cad ugu tartamayey isaga oo wata sumadda Hindiya ee T-Series. Kuwani waxay aasaaseen hoggaan muhiim ah bishii Abriil ee sanadkaas, in kasta oo kanaalka Kjellberg uu weli yahay kan labaad ee ugu badan ee ka diiwaangashan goobta, isagoo helay in ka badan 106 milyan oo macaamiil ah, laga bilaabo 12ka Sebtember 2020. Laga bilaabo 29kii Diseembar 2014 ilaa 14kii Febraayo 2017, Kjellberg wuxuu lahaa kanaalka loogu daawashada badan yahay Youtube-ka. Laga bilaabo 27-ka Maajo 2020, kanaalkiisa wuxuu helay in ka badan 25 bilyan oo aragti, oo lagu qiimeeyay kanaalka 16-aad ee loogu daawashada badan yahay mareegta. Macaamiisha kanaalka iyo aragtidiisa labadaba waxay kujiraan kuwa ugu badan ee shaqsiyaadka ku shaqeeya.
Caannimada Kjellberg ee YouTube iyo baahinta ballaaran ee warbaahinta ayaa ka dhigtay isaga mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan internetka iyo hal abuureyaasha waxyaabaha ku jira. Dhageysiyayaashan iyo dareenka warbaahinta awgeed, baahintiisa ciyaaraha indie waxay abuurtay saameyn Oprah, iyadoo kor u qaadeysa iibka cinwaannada uu ciyaaro. Sannadkii 2016, majaladda Time ayaa u magacowday mid ka mid ah 100-ka qof ee adduunka ugu saameynta badan
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=PewDiePie&oldid=205876"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Sebteembar 2020, marka ee eheed 03:39.